Nin adeer u ah Bashaar al-Assad oo maxkamad Faransiis ah ku xukuntay afar sano oo… – Hagaag.com
Nin adeer u ah Bashaar al-Assad oo maxkamad Faransiis ah ku xukuntay afar sano oo…
Maxkamad kutaala magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska ayaa xukun adag oo xabsi ah ku riday nin adeer u ah Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar Al Assad, kadib markii lagu helay qaar kamid ah dambiyo lagu soo eedeeyay.
Rifaat Al Assad 82-sano jir ah ayaa maxkamada kutaala Faransiiska ku riday afar sano oo xabsi ah, waxaana ninkan lagu helay dambi ah in uu lunsaday sidoo kale ku dhex jiray howlaha lacag dhaqida.
Waxa uu beeniyay Rifaat Al Assad in uu galay dambiyada lagu soo eedeeyay, waxa ayna qareenada difaacaya ninkan Rifaat sheegeen in racfaan ka qaadan doonaan xukunka lagu riday.
Maxkamadan kutaala dalka Faransiiska ayaa sidoo kale amartay in lala wareego dhamaan hantida Rifaat Al Assad u taala gudaha dalkaasi, lamana oga ilaa hadda qiimaha hantida Faransiiska u taala Mas’uulkan u dhashay Suuriya.
Rifaat Al Assad , ayaa Madaxweyne kuxigeen kasoo noqday dalka Suuriya, waxa uu sidoo kale soo noqday taliyaha ciidamada dalka Suuriya xili uu dalkaasi Madaxweyne ka ahaa Walaalkiis Xaafid Al Asad, wuxuu u soo cararay dalka Faransiiska kadib markii uu ku fashilmay inuu afgembiyo walaakiis.